တယ်လီကွန်းဘူတာရုံ power supply system ကို - တရုတ် Renergy ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ
တယ်လီကွန်းဘူတာရုံ power supply system ကို
တယ်လီကွန်းဘူတာလုံလောက်သောဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများသေချာစေရန်ကမ္ဘာတဝှမ်းများစွာသောချထားလျက်ရှိသည်။ ဤအဘူတာအဘို့ပါဝါလိုအပ်ချက်များကိုမကြာခဏမသာလုပ်ကိုင်ရန်စျေးကြီးပေမယ့်လည်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာထောက်ပံ့ရေး၏ဆက်လက်တိုးနှင့်အတူနေသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မိတျဆှေသဘောမရှိသောဒီဇယ်မီးစက်မှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာအများစုအတွက်, ဒီဇယ်မီးစက်၏အသုံးပြုမှုကိုမကြာမီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အနိမ့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ Renergy လေတိုက်တာဘိုင်ဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုနေရာများတွင်ရန်ခက်ခဲအတွက်တပ်ဆင်ပါစေ။
လျှောက်လွှာ: ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာတရုတ်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဘူတာရုံများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သံကိုပါဝါအရင်းအမြစ်ပေးရန်။
2008 ၏ နှစ်မှစ. , Renergy တရုတ်မိုဘိုင်းအတွက်ကျေးလက်ဒေသဧရိယာထဲမှာတယ်လီဘူတာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပါဝါအရင်းအမြစ်များ၏ဒီဇိုင်းပါဝင်ခဲ့သိရသည်။ သစ်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် updated က်ဘ်ဆိုက်များအများစုမှာတောင်များနှင့်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ဆိုဒ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူအသေးအဖွဲအနေဖြင့်ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုယခုနှစ်ခပ်သိမ်းသောကာလသယ်ဆောင်နိုင်လိုအပ်သောခဲ့သည်
ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်၏အဓိကသော့ချက်စက်ကိရိယာများမှ Renergy လေတာဘိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျေးလက်ဒေသရှိဝေးလံသောပါဝါစနစ်များအဓိကဒြပ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ကဲ့သို့သော, ဒီတာဘိုင်တရုတ်၏အနောက်မြောက်ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်ရှိနိုငျသောရာသီဥတုအလွန်ကြမ်းတမ်းအစွန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေပြခဲ့သည်။ အနောက်မြောက်ဒေသတွင်လေထန်ဧရိယာ၏, မဂ္ဂါဝပ်လေတိုက်ခြံအများစုရှိတည်ရှိသည်။ လေတိုက်၏အလွန်အားကောင်းတဲ့လေပြင်းတိုက်ခြင်း, အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းယခုနှစ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖွစျနိုငျ, ဤကြောင့်မြင့်မားတဲ့အမြင့်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများတည်ဆောက်ထားခံရဖို့ဘယ်မှာရှိပိုပြီးထိတွေ့နေရာများမှပိုဆိုးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာများတွင်မှာ installed မဆိုပစ္စည်းကိရိယာများနိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်နေတုန်းရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခဲ့ကြောင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစနစ်အား 2009 ခုနှစ်ကတည်းကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့သည်နှင့်တပ်ဆင်က်ဘ်ဆိုက်များမှာပါဝါစနစ်ကအလွန်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Renergy တရုတ်မိုဘိုင်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်၏ရာပေါင်းများစွာ installed ။ ထိုနောက်မှ, Renergy တရုတ်သမဂ္ဂ, China Telecom ကုမ္ပဏီများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်ကပေးလာတယ်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ Renergy ရုရှား, Tajikistan နှင့်အီရန်အတွက်တယ်လီကွန်းဖောက်သည်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်၏ရာပေါင်းများစွာပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။
လေတိုက်တာဘိုင်နှင့်နေရောင်ခြည် panel ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်အဘို့, 48V လေတိုက်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဟိုက်ဘရစ် controller ကိုမှတဆင့် DC48 ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်စုသို့ထောက်ပံ့ရေးပါဝါအားသွင်း, လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့။
ဒီဇယ်မီးစက် backup လုပ်ထား power supply အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ System ကိုတစ်ဦးချွတ်ဇယားကွက်အင်ဗာတာမှတစ်ဆင့် AC ပါဝါများကိုအတိုင်းအတာများနှင့်တစ်ဦးဇယားကွက်ပေါ်မှာအင်ဗာတာမှတစ်ဆင့်ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်ရန်လည်းမရရှိနိုင်ပါနိုင်ပါတယ်။
RW-5kW variable ကိုအစေး, DC200V
လေတိုက် controller ကို
1. အကွိမျမြားစှာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel က connection ကို
backup လုပ်ထားအဖြစ် 3. ဒီဇယ်မီးစက်
4. နေရောင်ခြည် MPPT function ကို
5. လေတာဘိုင် MPPT function ကို
6. နေရောင်ခြည်ပါဝါ output ကိုဗို့အားကိုထိန်းချုပ်
7. လေတိုက်နှုန်းပါဝါ output ကိုဗို့အားကိုထိန်းချုပ်
9. Intelligent ဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ
10. System ကိုအပြစ်ရှာ diagnosing နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်၏
စီမံခန့်ခွဲမှုအပြေး 12. လေတာဘိုင်။
တယ်လီကွန်းဘူတာရုံ, signal ကိုဘူတာရုံ, ဂျီအက်စ်အမ်အခြေစိုက်စခန်းဘူတာနှင့်ဒါပေါ်မှာ။
Post ကိုအချိန်: ဧပြီ-19-2018